एउटै गोत्रमा किन चल्दैन विवाह ? यस्तो छ कारण - Dhangadhi Khabar
बिहिबार २३, मङि्सर २०७८ १२:०५
एउटै गोत्रमा किन चल्दैन विवाह ? यस्तो छ कारण
हरेक देश,हरेक समाज वा धर्मको विवाहमा आ–आफ्नो नियम रहेको हुन्छ । यस नियमको परापूर्वकाल देखि नै पालन हुँदै आएको छ । प्राय हिन्दु धर्ममा एउटै गोत्रमा विवाह गर्नु उचित मानिदैंन । शास्त्रहरुका अनुसार शास्त्रअनुसार ऋषि विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्धाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप र अगस्त्य गरी आठ ऋषि गोत्र सम्बन्धित हुन्छन् ।
ज्योतिषशास्त्र मात्रा नभई विज्ञानले पनि भन्छ कि, यदि कोही दुई जना एक गोत्र हुनुको अर्थ दुवै जना एकै मूलका र एकै कुल वंशका हुन् । दुवैबीच पारिवारिक नाता हुन्छ । एकै गोत्रमा विवाह गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन किनकि एकै गोत्रको केटा र केटी एक अर्काका भाईबहिनी हुन्छन् ।
एकै कुलका वा एकै गोत्रमा विवाह गर्दा मानिसहरूले जीवनमा केही समस्याको सामना गनुपर्छ । विवाहपछि हुनेवाला बच्चामा पनि कुनै अवगुण आउँछ । विज्ञानका अनुसार एकै कुल वा गोत्रमा विवाह गर्नबाट बच्नुपर्छ ।
भविष्यमा हुने सन्तानको आनुवांशिक दोष बचाउनको लागि आफ्नो वंश वा गोत्रभन्दा बाहिरको हुनु अत्यन्त्यै आवश्यक हुन्छ । सदियौदेखि आजसम्म हिन्दु धर्ममा यी नियमको पालन गरीरहेका छौं । जसलाई विज्ञानको दृष्टिले पनि सही मानेको छ ।
आइतबार २४, साउन २०७८ १२:२१ मा प्रकाशित
कैलालीमा 'ओमिक्रोन’ रोकथामका लागि डिसीएमसीले गरेका निर्णय यी हुन् ? (निर्णयसहित)
जीपको ठक्करबाट बाजुरामा एक बालको मृत्यु